Mpikamban’ny governemanta : Manohy ny asa fampandehanan-draharaha -
AccueilSongandinaMpikamban’ny governemanta : Manohy ny asa fampandehanan-draharaha
Nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina tamin’ny fanambarana nataony omaly, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha, fa mbola manohy ny asa fampandehanan-draharaha ireo mpikamban’ny governemanta rehetra mandra-pitsangan’ny governemanta vaovao.
Ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier sy ny governemanta tarihiny nametra-pialana tamin’ny andron’iny omaly iny, ary dia voatendry taorian’izany ihany koa anefa ny praiminisitra solony, Ntsay Christian.
Mandra-panangan’ity praiminisitra ity ny governemantan’ny marimaritra iraisana anefa, dia tsy maintsy mamita ny asa aman’andraikiny andavanandro ireo mpikamban’ny governemanta notarihin’ny praiminisitra teo aloha.
Notsindrian’ny Filoham-pirenena mantsy fa tsy mahazo miato, ary tsy afa-miandry ny asam-panjakana satria miankina tanteraka amin’izany ny fiainam-pirenena sy ny vahoaka. Tsy maintsy atao hoy izy, izay hampandeha hatrany ny raharaham-panjakana eto amin’ny firenena.
Ankoatra izay, any amin’ity praiminisitra vaovao vao voatendry ity izany ny baolina amin’ny fananganana ny governemantan’ny marimaritra iraisana. Ity praiminisitra ity ihany mantsy no manolotra ny anaran’ireo izay hiara-hiasa aminy eo anivon’ny governemantan’ ny Filoham-pirenena. Andrasana araka izany, ny fitsanganan’ny governemanta vaovao manaraka ilay fe-potoana voatondron’ny didy navoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC), izay ao anatin’ny fito andro.
Vao nilaza fotsiny ny filohan’ny Antenimieram-pirenena fa hotapahana ny karaman’ireo solombavambahoaka tsy tonga manatrika fivoriana dia indro fa mitady hevitra hanarian-dia ireo olona voarebireby sy nokaramaina hitokona etsy amin’ny lapan’ny tanàna ireo solombavambahoaka. Milamina ny ...Tohiny